စာရေးဆရာလား။ စာအုပ်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်အရောင်းစာရေးဖြစ်လာစေရန်နည်းလမ်း ၇ ခု Martech Zone
အကယ်၍ သင်သည်စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်၏အလုပ်အကိုင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်ကိုအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်းဟူသောမေးခွန်းကိုသင်မေးရပေမည်။ ထုတ်ဝေသူသို့မဟုတ်အရောင်းရဆုံးစာရေးသူထံ။ ဟုတ်လား ကောင်းပြီ၊ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်မင်းရဲ့စာအုပ်တွေကိုအများဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှစာဖတ်သူတွေကိုရောင်းချင်ရင်တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်အဲဒါဟာလုံးဝအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင်ဤသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏ဂုဏ်သတင်းကိုတစ်ခါမှမပြောင်းလဲစေဘဲထင်ရှားစေသည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏အသံကိုသင်ကြားစေလိုလျှင်ထိရောက်ပြီးသီးသန့်တိုးတက်မှုအချို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာရေးသားထားခြင်းမရှိပါက ၀ တ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုအရောင်းရဆုံးရောင်းသူအဖြစ် ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ စာရေးခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားရုံသာမကဘဲသင့်စာအုပ်ကိုအရောင်းရဆုံးအရောင်းစာရေးဖြစ်စေဖို့အတွက်အခြားဖြစ်ရပ်မှန်များကိုဂရုစိုက်သင့်သည်။
အဲဒီလိုလုပ်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသိလိုပါသလား? ထို့နောက်သင်၏စာအုပ်ကိုမြို့၏အကြီးမားဆုံးဟောပြောချက်အဖြစ်သင်ပြုလုပ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းခြောက်ခုကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ရှေ့ဆက်ဖတ်ရုံသာဤအကြံပြုချက်များသည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ပါသည်။
သင်ယုံကြည်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာပါ - အကယ်၍ သင်သည်လူအုပ်စုကိုအလုံအလောက်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကသင်၏စာအုပ်ကိုအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုသင်၏ ဦး နှောက်တွင်အကြံဥာဏ်တစ်ခုထည့်နေလျှင်သင်လုံးဝမှားသည်။ အဲဒီအစား၊ သင်စိတ်ဝင်စားသောရှာဖွေရန်နှင့်အတူတူပင်အကြောင်းကိုဖတ်လိုသည့်ခေါင်းစဉ်များပေါ်တွင်ရေးပါ။ Carol Shields က 'မင်းဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကိုမင်းရှာမတွေ့နိုင်တာကိုရေးပါ' ထို့ကြောင့်ထူးခြားသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုသမားရိုးကျပုံစံဖြင့်ရေးသားခဲ့သော်လည်းသင့်အတွက်အရေးကြီးသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့လျှင်၎င်းသည်အရောင်းရဆုံးရောင်းသူဖြစ်လာနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းပိုများနေသည်။
မှန်ကန်တဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ပါ - ၀ တ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုအခြားအရာများနှင့်ထင်ရှားပေါ်လွင်စေမည့်အကောင်းဆုံးအချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာယင်း၏အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ သင်၏စာဖတ်သူများသည်သင်၏စာအုပ်ကိုသူတစ်ပါးနှင့်ဆက်စပ်နိုင်မှသာအခြားသူများအားအကြံပြုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်စာအုပ်သည်အခြားသူများဖတ်ရန်လိုအပ်သောသတင်းစကားကိုသယ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိသောအခါသူတို့သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဝတ္ထုအတွက်မှန်ကန်သောအကြောင်းအရာကိုရှာဖွေရန်သင့်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်နှင့်ခွန်အားကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည်။
အဆိုပါလေသံကြားနေပါစေ - သင်၏ဆောင်ပုဒ်သည်သင်၏စာအုပ်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မှတ်မိစေရန်ပြုလုပ်လိုပါကစာဖတ်သူများအားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်နည်းဖြင့်ရေးသင့်သည်။ ဒါပေမယ့်စောင့်ပါ ဒီကြေငြာချက်အရမင်းရဲ့ဇာတ်ကြောင်းဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုကိုသာအခြေခံသင့်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ သင်၏နိုင်ငံ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သင်၏နှလုံးနှင့်နီးစပ်သောအရာတစ်ခုခုအကြောင်းကောင်းစွာရေးနိုင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပရိသတ်များအနေဖြင့်စကားဝိုင်းများ၊ ဇာတ်ကြောင်းများ၊ အရေးအသားပုံစံစသည်တို့ကိုနားလည်နိုင်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် Booker Prize ဆုရှင် - လူသတ်မှုခုနစ်ခု၏အကျဉ်းချုပ်သမိုင်းကိုသင်မှတ်မိပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ငါဒီလိုမျိုးအသံမျိုးအကြောင်းပြောနေတာပါ။
သင်၏ 'Book Cover' ကိုထူးခြားစွာဒီဇိုင်းဆွဲပါ နှစ်ပေါင်းများစွာ 'စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအဖုံးဖြင့်မဝေဖန်ပါနှင့်' ဟူသောကြေညာချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကောင်းယုံကြည်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်လက်တွေ့ကျကျစာအုပ်၏အပြင်ပန်းပုံပြင်သည်အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာဖော်ပြပြီးအတွင်းပိုင်းတွင်ရေးသားထားသည်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားစာအုပ်ကိုကြင်ကြင်နာနာကြည့်ချင်ရင်သိသာထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ငွေအမြောက်အများကိုထုတ်ပစ်ဖို့လိုတယ်လို့မထင်ပါနဲ့။ သင်လိုအပ်သမျှသည်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစိတ်ကူးများကိုစာအုပ်မျက်နှာဖုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ဝေသူကိုရွေးချယ်ပါ - ကောင်းပြီ၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအရောင်းရဆုံးရောင်းသူအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသောအခါထုတ်ဝေသူသည် 'အရေးအပါဆုံး' အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ သင်ရွေးချယ်သောထုတ်ဝေသူ၏အမှတ်တံဆိပ်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်သင်၏စာအုပ်၏ကြီးမားသောလွှမ်းမိုးမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ သင်၏စာအုပ်ရောင်းအားမြင့်တက်သွားစေနိုင်သည့်ထုတ်ဝေသူကိုရွေးချယ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ !!
စာရေးသူစာမျက်နှာကို Goodreads တွင်ဖန်တီးပါ။ - စာအုပ်နှစ်သက်သူများနှင့်စပ်လျဉ်း။ Goodreads သည်နာမည်ကြီးနေသည်။ ဒါကြောင့်မင်းစာအုပ်တွေကိုကောင်းကောင်းရောင်းချင်ရင်ကမ္ဘာတစ်လွှားကပရိသတ်တွေမြင်အောင်လုပ်ပေးသင့်တယ်။ နှင့်အညီ, Goodreads အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါ! Goodreads တွင်အကောင့်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏မိတ်ဆွေများ၊ နောက်လိုက်များနှင့်စာဖတ်သူများအားဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုထားခဲ့ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အခြားအသုံးပြုသူများအားအကြံပြုရန်တိုက်တွန်းပါ။
ကြော်ငြာကိုဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးပါ - ယနေ့ခေတ်တွင်လူများသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာ၊ Instagram စသည်တို့ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာကွန်ရက်များ၌အွန်လိုင်းတွင်ရှိနေစဉ်သူတို့၏အားလပ်ချိန်အများစုကိုကုန်ဆုံးကြပြီ။ ထို့ကြောင့်သင်၏စာအုပ်ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ထင်ရှားရှားထားခဲ့လိုပါကထိုစာအုပ်များကိုသင်၏စျေးကွက်တင်ရန်အသုံးပြုသည်။ သင့်ရဲ့အသိအမြင်နှင့်လူသိရှင်ကြားမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုသိချင်လဲ။ ကောင်းပြီ၊ ရိုးရိုးလေးနဲ့လွယ်တယ်။ စာအုပ်တွဲရေးဆွဲခြင်း၊ စာအုပ်ကိုးကားခြင်းများဝေငှခြင်း၊ စာအုပ်ရေးဆွဲခြင်းပုံဆွဲခြင်းသည်သင့်အတွက်အမှန်ပင်အံ့ဖွယ်ရာများဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်၏စာအုပ်သည်အရောင်းရဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်လိုပါကအထက်ဖော်ပြပါအရေးကြီးသောအချက်အလက်များအပြင်အခြားအရာများကိုလည်းသင့်စိတ်တွင်မှတ်ထားသင့်သည်။ သင်၏စာအုပ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ဘာသာပြန်များကိုထုတ်ဝေခြင်း၊ စာရေးသူ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိခြင်း၊ သင်၏စာရင်းသွင်းသူများထံအီးမေးလ်များပေးပို့ခြင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစာအုပ်ပုံနှိပ်ခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့ပင်အရောင်းရဆုံးရောင်းသူ မှလွဲ၍ ဘာမှမဖြစ်လာနိုင်ပါ။ ဒီတော့စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့! ဤအကြံဥာဏ်များကိုသာထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ၊ ဆက်လက်၍ ရေးပါ၊ မကြာမီသင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းရဆုံးစာအုပ်ကိုရေးပါ။